ကလေးတစ်ယောက်မိခင်လို့ ဘယ်နည်းနဲ့မှမထင်ရလောက်အောင်ကို တစ်သားမွေးတစ်သွေးလှဆိုသလို နုပျိုလှပလွန်းနေတဲ့ မိုးယုစံ – XB Media Myanmar
ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးရေ…. တစ်ချိန်တစ်ခါက အနုပညာလောကထဲမှာ တကယ့်ကိုနာမည်ကျော် လူငယ်သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးလေး ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မိုးယုစံဆိုတာ ပရိတ်သတ်ကြီးရဲ့အချစ်တော်လေးပါနော်။ အိမ်ထောင်ကျပြီးသွားတဲ့နောက်မှာ မိသားစုအတွက် အချိန်ပေးကြိုးစားနေရတာကြောင့်အနုပညာအလုပ်တွေဘက်ကိုမလှည့်နိုင်ပေမယ့် ပရိတ်သတ်တွေကတော့ ချစ်မြဲချစ်ဆဲအားပေးမြဲ ပါပဲနော်။
သူမဟာလက်ရှိမှာလည်း အရမ်းကိုပျော်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုကမ္ဘာလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့ သူမကိုအရမ်းချစ် အရမ်းဂရုစိုက်တဲ့ ချစ်ခင်ပွန်းရယ် ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ သားသားလေး Austin ရယ်ကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရထားတဲ့မိခင်လေးတစ်ယောက်လည်ဖြစ်ပါတယ်နော်။လတ်တလောအနေနဲ့ကတော့ သူမဟာ သူမချစ်ရတဲ့မိသားစုလေးနဲ့အတူ ခရီးလေးတွေထွက်ဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်နော်။
သူမဟာ အခုတစ်ခါမှာတော့ အရမ်းကိုလှပလွန်းပြီး သာယာနေတဲ့ ပိတ်ချင်းမြောင်ဘက်ကို ရောက်ရှိနေခဲ့ပါတယ်နော်။ မိသားစုလေးနဲ့အတူတူ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လည်ပတ်ရင်းနဲ့ သူမတစ်ကိုယ်တည်းရိုက်ထားတဲ့ အလှပုံရိပ်လေးတွေကိုတော့ ချစ်ပရိတ်သတ်တွေအတွက် သူမရဲ့လူမှုစာမျက်နှာပေါ်မှာတင်ပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်နော်။ ကဲ…. ကလေးတစ်ယောက်မိခင်လို့ ဘယ်နည်းနဲ့မှမထင်ရလောက်အောင်ကို အရင်ကအတိုင်း နုပျိုလှပလွန်းနေတဲ့ မင်းသမီးချောလေးမိုးယုရဲ့ ခရီးသွားပုံရိပ်လေးတွေကို ချစ်ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက်ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်နော်။